Ihe omuma nke RAM na ROM nke usoro Redmi Rịba ama 8 apụtawo ìhè | Gam akporosis
E nwere ọtụtụ atụmanya gbara gburugburu ngwaọrụ ndị ọzọ site na ụlọ ọrụ bụbu otu n'ime usoro usoro Xiaomi. Anyị na-ezo aka n'ụzọ doro anya Redmi, onye nrụpụta ama ama ama ama ama ama ya na nnukwu ụlọ ọrụ ndị China akpọrọ. N'aka nke ya, anyị na-ezo aka mobiles nke Redmi Rịba ama 8 usoro, nke a ga - enwe ụdị nke ọkọlọtọ na ụdị vitamin dị iche iche nke a, na nke ahụ ga-ewepụta nke a na August 29 ọzọ.
Naanị awa ole na ole gara aga anyị na-ekwu maka ya igwefoto isi nke ga-enwe ma Redmi Note 8 na Redmi Note 8 Pro. Nke a ga-abụ 64 MP, ebe ọ bụ na Samsung bụ naanị onye nwere mmetụta nke mkpebi a maka smartphones - nke ọ mere gọọmentị na Mee nke afọ a - o doro anya na ohuru ISOCELL Bright GW1 Ọ ga-abụ oghere nke na-eduga ngalaba ngalaba foto na njedebe abụọ nke uru bara uru. Mana ihe anyị lekwasịrị anya ugbu a bụ RAM na ROM dị iche iche nke a ga-enye ha n'ahịayanakwa nhọrọ agba, ma ugbu a, anyị na-abanye n'ime ya site na ozi ọhụụ pụtara.
Dị ka ihe ọnụ ụzọ ndị ama ama My Smart Ahịa emeela ka awa ole na ole gara aga dabere na ntinye nke isi mmalite nyere, el Ihe ngosi RedN 8 ga-abanye n'ahịa ndị China na ụdị atọ: ihe kachasị mkpa ga-abụ 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa; nke etiti, 6 GB nke Ram na nchekwa 64 GB; na nke kachasị ọhụrụ na nke kachasị elu, 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa. A ga-ahapụ ihe ndị a niile na agba agba atọ: Meteorite Black (nwa), Fantasy Blue (acha anụnụ anụnụ) na White (ọcha).
Redmi Rịba ama 8 leaked
Na-ekwu okwu banyere Ihe ngosi RedN 8 Pro, A ga-emekwa ka ọ bụrụ onye isi na China na nsụgharị nke 6 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa na 6 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa, mana, iji nye ya aka dị elu, ọ ga-enwe ụdị dị iche iche nke 8 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa maka ndị ọrụ ahụ na-arịọ maka ma chọọ karịa. Colordị agba ya bụ Green Green (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ), Fritillaria White (ọcha) na Electro-optical Ash (ojii).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe RAM na ROM nke usoro Redmi Note 8 apụtawo ìhè